Muftiga weeyn ee shiikh maxamuud ow cabdulle cariif oo ka digay dhalin yaro…. – Biyacade
August 30, 2016 September 7, 2016 biyacade
Muftiga weeyn ee shiikh maxamuud ow cabdulle cariif oo ka digay dhalin yaro….
“Xafladaha dadka dhiganaya ee laga sooqeyb galayo, waa munkar, waana wax aan fiicneyn, Diinta islaamka raad kuma lahan,
marka uu qof dhasho waxyaabaha Diinta qabto waa in maalinta 7aad la suneeyo oo waqlal loo sameeyo, in xafladaha dhalashada la dhigto waxaa laga keenay reer galbeedka iyo meelaha gaalada joogaan”ayuu yiri Sheekh Maxamuud
Cabdulle Cariif.Muftiga weeyn ee shiikh maxamuud ow cabdulle cariif oo ka digay dhalin yaro maalmahaan dambe xaflada ku dhigta hoteellada muqdisho.
Sheekha ayaa sheegay in arinkaan yahay mid laga soo min guuriyay reer galbeedka tahay na arin laga xumaado.
Asagoo warkiisa sii wata soo qaatau xadiiskii Rasuulka NNKH ee ahaa . من تشبه بفوم فهو منهم oo ah Ruuxii qolo isu shabaha dhaqankooda jeclaada ayagooo ka kid yahay.
Previous Sawira laga soo qaaday Deegaanka biyacade ee Afarta Tuulo